Fanamarinana - Association of Accredited Translators and Interpreters of Madagascar
Momba ny FANAMARINANA AATIM
Inona no antsoina hoe Fanamarinan’ny AATIM?
Ny fanamarinan’ny AATIM dia mari-pahaizana ekena sy fantatra eto Madagasikara sy eo amin’ny sehatry ny fandikan-teny. Ny tanjon’ny fadaharana fahazoana fanamarinana ao amin’ny AATIM dia ny hampiakatra ny fenitra arak’asa, hanatsara ny fahombiazan’ny tsirairay ary hanekena ara-dalàna ireo mpandika teny manana fahalalana sy fahaiza-manao ilaina moba izany.
Te ahazo ny Fanamarinana omen’ny AATIM ve ianao?
Efa anananao ve izay ilaina rehetra? Tsy zavatra maivana sy mora ny fanadinana ahazoana fanamarinana, fa kosa ny fahombiazana vokatry ny zava-bita azo dia hahafa-po anao sy hankasitrahanao mandritra ny fotoana rehetra iasanao.
Inona avy no tombotsoa azo amin’ny fananana Fanamarinan’ny AATIM?
Ny fahazoana sy fananana Fanamarinana AATIM dia làlana iray feno traikefa tsara ho an’ny mpandika teny. Izy io no mampiavaka ny isam-batan’olona sy manokatra varavarana ho an’ny fivoarana eo amin’ny sehatry asa sy ny ahazoana tambiny mendrika ny asa vita.
Karatry ny Mpandika teny Voamarina
Inona no antsoina hoe Karatra fanamarinan’ny AATIM ho an’ny Mpandika teny?
Izy ity dia mari-pamantarana elektronika izay azo ampiasaina hanamarinana fa nahazo ny fanamarinana AATIM ianao ary afaka atao isan’ny antontan-taratasy mifandraika amin’ny asanao. Ny mpandika teny sasany dia mampiasa ity karatra ity ho fanamarinana fanambarana marina. Ny sasany koa mampiasa azy amin’ny zavatra hafa. Azonao atao ny mampiasa azy io arak’izay ilainao.
Fa nahoana aho no mila karatra fanamarinana?
Ny karatryny mpandika teny voamarin”ny AATIM dia famantarana mora hita sy haingana fa tena nahazo fankatoavana sy fanamarinana avy amin’ny AATIM ianao.
Mila mandoa vola ve aho raha te ahazo io karatra io?
Maimaim-poana ny Karatra Fanamarinana AATIM!
Inona avy no hita ao anatin’io karatra io?
Ahitana ny mombamomba anao amin’ny maha-mpandika teny voamarina anao io karatra io: anarana, fitambarana fiteny iasanao ary fanamarinana anao manokana. Ahitana rohy mankany amin’ny rafitra fanamarinan’ny AATIM ihany koa izy io mba ahafahan’ny mpanjifa manamarina fa tena nahazo Fanamarinana ara-dalàna tokoa ianao.